Biilasha ballaarin doona iskuullada charter-ka ee Iowa isla markaana abuuri doona deeqo waxbarasho o | KWIT
Kuwa ka soo horjeedaa waxay leeyihiin sharciyeynta iyo deeqaha waxbarasho ee qaabka foojarku u weeciyaan lacagaha ka baxsan dugsiyada dawladda taasoo adkeyneysa iyaga inay wax baraan ardayda danta yar.
Biilasha ayaa hadda loo gudbiyay Guddiga Waxbarashada ee Golaha. Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu u baahan yahay inuu halkaas u gudbo dhammaadka wiigga si uu xaq ugu yeesho dood ahaan soo-jeedin keligeed ah.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay soo warineysaa 27 kale oo Iowans ah inay u dhinteen COVID-19 dhibaatooyinka leh in ka badan 450 natiijooyin cusub oo tijaabo oo wanaagsan oo leh 18 kale oo ka tirsan Gobolka Woodbury. Tirada dadka ku dhintay Iowa waxay ka yartahay 5,500.
Gobolka oo dhan waxaa jira ku dhowaad 210 oo isbitaal la dhigay, oo ay ku jiraan 15 oo ku yaal Sioux City labada xarumood ee caafimaad. Tiradaasi waxay si joogto ah u joogtey dhowr iyo toban maalmood dhexe.
Shaqaalaha Hilibka cunidda ee waddanka oo dhan waxay bilaabeen inay qaataan tallaallada coronavirus kumanaan kalena waxay fursad u heli doonaan inay is-tallaalaan toddobaadkan. Saraakiisha ururka shaqaalaha cuntada iyo ganacsiga ee United United States ayaa sheegay in xiisaha ay u qabaan talaalka uu aad ugu badan yahay shaqaalaha ka dib markii warshada ay saameyn weyn ku yeelatay viruska. Shirkadaha waaweyn ee hilibka kafaarista oo ay ka mid yihiin Tyson Foods iyo Smithfield ayaa sheegaya in shaqaalaha Iowa iyo Nebraska ay bilaabayaan inay helaan talaalkan todobaadkan.